Korea Kimchi ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
အင်္ဂလိပ်လို Napa Cabbage Kimchi ၊ ကိုးရီးယားလို Pogi-Kimchi (or) Tongbacheu-Kimchi
မုန်ညှင်းထုပ်ကင်ချီ (သို.) Pogi-Kimchi
မုန်ညှင်းဖြူ ထုပ်............၃ ကီလို (သို့ ) ၆ ထုပ်ခန်.
ဆား.........................၁/၂ ခွက်( လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
ပထမအဆင့်အနေနဲ့မုန်ညှင်းဖြူ အောက်ခြေအမြစ်နားကိုဖြတ်ပြီး ဓါးနဲ. ၂ လက်မလောက်ထိုးခွဲ
လှီးလိုက်ပါ( တစ်ထုပ်လုံးကိုမလှီးရပါ) ။ ဟသွားတဲ့နေရာကနေလက်နှစ်ဖက်နဲ.ဆွဲဖြဲ လိုက်ပါ။
ရေများများထည့်ထားသောဇလုံမှာ ရေဖွားဖွားဖြစ်နေအောင်ဆေးပြီး အနည်းငယ်စစ်ထားပါ။
မုန်ညှင်းရွက်တစ်ခုချင်းစီကြားထဲကိုနှံ့ အောင် ဆားပက်ထည့်ပြီး ဇလုံတစ်ခုထဲမှာပဲ..၁၀ မိနစ်
(ဆားတွေအားလုံးပျံ့ နှံ့ ပြီးကင်ချီလုပ်ချိန်မှာကြွပ်စေဖို.အတွက်ဖြစ်ပါတယ်)
ထိုအချိန်မှာ potage လို.ခေါ်တဲ့ကော်ရည်ဆန်ဆန်အရည်တစ်မျိုးပြု လုပ်ရပါမယ်..။
ကောက်ညှင်း မှုန် ....၂ဇွန်း(ထမင်းစားဇွန်း)
သကြားညို.....၂ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
( သူတို.ကတော့ Mochiko powder လို့ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုပါတယ်)
ရေနဲကောက်ညှင်းမှုန့် ကိုရောမွှေပြီး..မီးအေးအေးမှာအနည်းငယ်ပျစ်လာအောင်ကြို ပြီးအအေးခံထားရပါမယ်...။
ကြက်သွန်နီနုပ်နုပ်စဉ်း.....၁ ခွက်( လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
ကြက်သွန်ဖြူ ..။.............၁/၂ ခွက်(................။............)
ချင်းနုပ်နုပ်စဉ်း................၂ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
မုန်လာဥဖြူ မီးခြစ်ဆံကဲ့သို.အမျှင်.......၂ ခွက်(လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
ကြက်သွန်မြိတ်..............................၅ ပင်( ပါးပါးလှီး(သို.) လက်၁ ဆစ်ခန်.)
အရည်ကိုသီးသန့် ညှစ်ထုတ်ပြီးအဖတ်တွေကိုနုပ်နုပ်စဉ်းပါ( ၂မျိုးလုံးထည့်ရန်လို )
ငရုတ်စပ်မှုန်.( အကြမ်းမှုန့် မဟုတ်)........ ၁ ခွက်မှ ၂ခွက်ခွဲထိ( လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
မိမိအစပ်မကြိုက်ရင် ၁ ခွက် ၊ ကြိုက်ရင် ၂ခွက်ခွဲအထိ
ဒါတွေအားလုံးရပြီဆိုရင် ၊ ထောင်းထားသောအရော ၊ ပါးပါးလှီးထားသောမုန်လာဥ ၊ကြက်သွန်
မြိတ်၊ ပုစွန်ဆားရည်စိမ် ၊ ငရုပ်စပ်မှုန်. တို.အားလုံးကိုအအေးခံထားတဲ့ကော်ရည်ထဲရောပြီးနှံ.နေ
ရောထားသောကင်ချီအနှစ်ကို ဆားပက်ထားတဲ့မုန်ညှင်းရွက်တွေကြားထဲလက်အိတ်အသုံးပြု ကာ
တစ်လွှာချင်းစီထဲနှစ်ဝင်နေအောင်သိပ်ထည့်ပြီး စဉ့်အိုး (သို.) ဖန်ပုလင်း( သို့ ) မိုက်ခရိုဝေ့ဒဏ်ခံ
အချိန်(၁) ရက်ခွဲ ၊ (၃၆) နာရီအကြာ သာမန်အခန်းအပူချိန်မှာထားပေးထားရပါမယ်..။အချိန်ပြည့်
လို.ဖွင့်ကြည်တဲ့အခါ အရည်တွေထွက်လာမှာဖြစ်သလို အရည်မှာပူဖောင်းလေးတွေထလာပါမှ
ထိုမှတဖန် ပုံမှန်ရေခဲသေတ္တာခန်းထဲပြောင်းရွှေ.ပြီး ၁ပတ်ကြာမှစားတာကပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ကင်ချီ
credit - ဟင်းချက်နည်းများ- fb